पोखरा, २३ फागुन। स्वर्गीय ललित गौचन स्मृति समाजसेवी पुरस्कार यस वर्ष वैदाम, लेकसाइडका सामाजिक अभियन्ता गिरिधारी अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ। नागरिक समाज पोखराले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी अधिकारीलाई सम्मान गरेको हो। अधिकारीलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पर्यटनविद् झलक थापले सम्मानपत्र, नागरिक समाज पोखराका संयोजक रामबहादुर पौडेलले फूल र पवित्रा जिसीले अविर लगाइ सम्मान गरेका थिए। लामो समय टोल विकास संस्था… पुरा पढौ
चितवन, २३ फागुन। संरक्षणकर्मीको व्यापक विरोधको बादजुद चितवनका पाँच गैँडा बर्दियामा स्थानान्तरण गरिएको छ। पछिल्लो पटक शुक्रबार दुर्इ पोथी गैँडा नियन्त्रणमा लिएर शनिबार बिहान बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा छाडिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमतर्फको सुखीभार घाँसेमैदान क्षेत्रबाट फागुन १८ गतेदेखि सुरु गरिएको गैँडा स्थानान्तरण कार्य हालका लागि सकिएको छ। फागुन १८ गते एउटा, १९ गते दुर्इ र शुक्रबार दुर्इ गरी पाँच गैँडा… पुरा पढौ
नवलपरासी, ११ फाल्गुन। सात पटक सेनामा भर्ती हुने प्रयास असफल भएपछि २५ वर्षीय ग्यामबहादुर रजालीमगर २५ वर्षको उमेरदेखि तरकारी खेतीमा लागे। सेनामा भर्ती हुने प्रयास असफल भए पनि उनी व्यावसायिक तरकारी खेतीमा भने अब्बल ठहरिए। भर्ती हुन जाने क्रममै सेनाका एक कर्मचारीले भनेको उखानमा 'जागिर खाए सरकारी, खेती गरी खाए तरकारी’ भन्ने उखान उनको मनमा निक्कै बिझेछ। त्यसैले उनी व्यावसायिक… पुरा पढौ
पर्वत, २२ फागुन। जिल्ला वन कार्यालय पर्वतले बिहीबारदेखि मोबाइल सेवा सुरु गरेको छ। वनसँग सम्बन्धित सूचना तथा प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधाबारे जनतालाई जानकारी दिन तथा सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि कार्यालयले मोबाइल सेवा सुरु गरेको हो। मोबाइल सेवाअन्तर्गत एसएमएसमार्फत् कार्यालयसँग सम्बन्धित सबै योजना र सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित सूचना उपभोक्ताको पहुँचसम्म सहज ढंगले पुर्‍याउने उद्देश्य कार्यालयले राखेको छ। जिल्लाका सबै सामुदायिक वनका… पुरा पढौ
पोखरा, २२ फागुन। गण्डकी उच्च मावि बोर्डिङ स्कूलमा शनिबार पुरस्कार वितरण गरिएको छ। कार्यक्रममा विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक, तथा विशेष अवार्डहरू वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्तले विद्यालयका गतिविधिले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने काम गरेको बताए। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रिन्सिपल रव्रि्रसाद बरालले विद्यालयको शैक्षिक प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए। विद्यालयले यो वर्ष स्वर्णयवर्षको रुपमा मनाएको छ।… पुरा पढौ
कालिकामा निबन्ध प्रतियोगिता
हेमजा २२, फागुन। अभ्यास शिक्षणका शिक्षकले पोखरा-१० स्थित कालिका पब्लिक कलेज, उच्च माविमा निबन्ध प्रतियोगिता गरेका छन्। उच्च मावि र स्नातक गरी दुर्इ तहमा भएको प्रतियोगिताअन्तर्गत उच्च मावितर्फ मोवाइलको प्रयोगले विद्यार्थीमा पारेको प्रभाव विषयमा एवम् स्नातक तहतर्फ उर्जा सङ्कट समस्या र समाधानका विषयमा प्रतियोगिता भएको थियो। उच्च मावितर्फ निश्चल थापा प्रथम, उत्तम कार्की द्वितीय, मदन गुरुङ तृतीय र सन्दीप सुवेदी… पुरा पढौ
पोखरा, २२ फागुन। नागरिक समाज पोखराले यस वर्षको स्व. ललित गौचन स्मृति समाजसेवा सम्मान बैदाम लेकसाइडका सामाजिक अभियन्ता गिरिधारी अधिकारीलाई प्रदान गर्ने भएको छ। नागरिक समाज पोखराको हालै बसेको बैठकले अधिकारीलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो। नागरिक समाज पोखराका संयोजक रामबहादुर पौडेलका अनुसार टोल विकासका अभियन्ता स्व. ललित गौचनको स्मृतिमा सामाजिक सेवामार्फत् पोखरालाई कर्मथलो बनाई विकाससँगै वातावरण एवम् सम्पदा संरक्षणमा… पुरा पढौ
पोखरा, २१ फागुन। बिजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले २१ औँ वाषिर्कोत्सवको अवसरमा शुक्रबार बैंकको प्रधान कार्यालय, अनामनगर तथा सभागृहचोक पोखरामा रक्तदान आयोजना गर्‍यो। कार्यक्रममा एक सय १८ जनाले रक्तदान गरेको बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोहर केसीले बताए। कार्यक्रममा लेखनाथ-१३, स्थित राधे-राधे वृद्धाश्रमलाई बैंकका तर्फबाट ३२ इन्चको एलइडी टिभी सहयोग गरिएको थियो। हाल बैंकले प्रधान कार्यालयसहित १४ शाखामार्फत् देशका विभिन्न स्थानमा… पुरा पढौ
मुस्ताङ, २१ फागुन। विदेशी गाइड टेरिजा हिमालपारिका जिल्ला मुस्ताङ, मनाङलगायत नेपालका कुनाकन्दरामा यात्रा गर्न रुचाउँछिन्। ६१ वर्षीय टेरिजाको साहास, परिश्रम, र जुझारुपन अझै उस्तै छ। उनी अहिले ३५ औँ पटक नेपाल आएको बताउँछिन्। सगरमाथाको देशका हिमाली जिल्ला भ्रमण गर्न पाउँदा आफूलाई सौभाग्यशाली ठानेको उनले बताइन्। टेरिजा भन्छिन्-'सन् १९८४ मा प्रथम पटक नेपाल भ्रमण आएकी थिएँ।’ त्यस भ्रमणबाट नेपालबारे धेरै कुरा… पुरा पढौ
पोखरा, २१ फागुन। स्टेप वाइ स्टेप उच्च मावि मासबार पोखराले विद्यालयमा पढाइ, खेलकुद एवम् अतिरिक्त क्रियाकलापमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कार वितरण गरेको छ। पुरस्कार वितरणमा पुरस्कार प्राप्त गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकको हातबाटै विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भने कार्यक्रममा विभिन्न गीत, रेम्स, नृत्यसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै संस्थापक प्राचार्य निर्मला बरालले विद्यालयले सधैँ अभिभावकको सल्लाह, सहयोग प्राप्त गरिरहने विश्वास प्रकट गरिन्।अभिभावकहरू… पुरा पढौ